तीन फरक कथा, फिल्म एउटै (हेर्नुस् युट्युबमा) :: Setopati
तीन फरक कथा, फिल्म एउटै (हेर्नुस् युट्युबमा)
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असोज २३
तीन फरक परिवेश र सन्दर्भमा बाँचेका तीन फरक जीवन।
तीन अलग कहानी तर फिल्म एउटै– शीप अफ थिसस।
तीन कथामा तपाईंलाई कुनै एक बढी मन पर्न सक्छ। तर तीन वटै कथा उत्तिकै सशक्त र इन्गेजिङ छ।
आँखा नदेख्ने युवती। फोटोग्राफर जो निकै सुन्दर फोटो खिच्छिन्। ट्रान्सप्लान्ट गरेर आँखा देख्न सक्ने भएपछि फोटो खिच्दा उनमा पहिलाको जस्तो राम्रो लाग्दैन। उनमा नयाँ द्वन्द्व सुरू हुन्छ। उनको जीवन दृष्टि बदल्ने यो द्वन्द्व बुझ्न भने फिल्म हेरेर थाहा पाउँदा रमाइलो हुनेछ। यो भागमा आदिया एल कासिफ मुख्य भूमिकामा छिन्।
यो भागमा एक जना साधूको कथा छ। मैत्रेय नामका यी पात्रको भूमिका नीरज कविले निर्वाह गरेका छन्। गहन जीवन दर्शन बोकेका उनी साधुभन्दा चिन्तकजस्ता छन्। सादगीपूर्ण जीवन बाँच्ने उनी खाली खुट्टै हिँड्छन्।
पशु हिंसाको विपक्षमा जीवनभर लडाइँ लडेका उनी लिभर सिरोसिस रोग लागुन्जेलसम्म पनि औषधि प्रयोग नगर्ने अडान लिन्छन्। पशु हिंसा गरिएका औषधि गर्न नचाहने उनको मनमा यही बेला अरूबेला भन्दा जीवन र मृत्युबारे गम्भीर सवाल पैदा हुन्छन्। यो सवाल पनि फिल्म हेरेरै थाहा पाउनुमा मजा छ।
यो कथामा स्टक ब्रोकरलाई केन्द्रीय पात्र बनाइएको छ। उनी किड्नी प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्ति हुन्। यात्रा क्रममा उनले किड्नी चोरिएका एक मान्छे भेट्छन्। त्यसपछि उनलाई आफ्नो शरीरमा प्रत्यारोपण गरिएको किड्नी कतै त्यही चोरी भएको मान्छेको त हैन भन्ने लाग्न लाग्छ। यो जिज्ञासामा उनी स्वीडेनसम्म पुग्छन्।
यो भागको मुख्य पात्रको भूमिकामा सोहूम शाहको अभिनय छ। यी तीन फरक कथा कहाँ गएर जोडिएलान्?
त्यो योगले पात्र र निर्देशकको कस्तो जीवन दर्शन बोल्छ? अढाइ घन्टाको 'शीप अफ थिसस'ले यो प्रश्नको जवाफ मात्रै दिँदैन, तपाईंको मनमा अनेक प्रश्न पनि जन्माइदिन्छ?
यो फिल्म सतहमा अंगदानबाट नयाँ जीवन पाउने तीन पात्रको कथा हो। अन्तर्यमा, फिल्मले जीवनको अस्तित्व, जीजिविषा र तत्वज्ञानका अनेक आयाम खोतलेको छ। तीन कथा फरक भए पनि सबै मुख्य पात्रमा आउने समस्या र परिवर्तनको असर जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। तीनै पात्र केही सोचमा, केही खोजमा निस्केका छन्।
'सीप अफ थिसस' को मुख्य विशेषता के भने, फिल्मका तीन अलग कथालाई निर्देशकले कहानी र संवाद अनुसारकै विम्बमा भनेका छन्। फिल्मको कथा न्यारेट गर्ने शैली प्रयोगात्मक शैली यसको मुख्य विशेषता हो।
सिनेमाटोग्राफी र ब्लकिङले धेरै दृश्य तपाईंलाई एकछिन पज गरेर हेर्न मनलागे अचम्म हुने छैन।
आनन्द गान्धीको लेखन, निर्देशन र निर्माणको यो फिल्म यस्तै अनेक विशेषताका कारण भारतको राष्ट्रिय पुरस्कार जित्न सफल भएको थियो। सन् २०१२ को टोरन्टो इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा प्रिमियर भएको यो भारतबाहिरका थुप्रै महोत्सवमा पुरस्कृत फिल्म हो।
'शीप अफ थिसस' दिल-दिमाग उद्वेलित बनाउन चाहने दर्शकलाई मनपर्ने धेरै विशेषताले सम्पन्न छ। आनन्द गान्धीले आत्मसोध र सत्यखोजको माध्यम बनाएको यो फिल्म गम्भीर छ। फिल्म हेर्दा यसले तपाईंको सहभागीता माग गर्छ।